भारत सिध्याउने पाकिस्तानी योजनाको पर्दाफाँस ! अमेरिकाले खुलासा गर्यो यस्तो रहस्य – मुलधार न्युज
Home > प्रवास > भारत सिध्याउने पाकिस्तानी योजनाको पर्दाफाँस ! अमेरिकाले खुलासा गर्यो यस्तो रहस्य
२२ भाद्र २०७५, शुक्रबार १६:०४
वाशिंगटन– पाकिस्तानका परमाणु हतियारहरू हेर्ने लेखकहरूले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अवको केही वर्षमा पाकिस्तान सुरक्षाका दृष्ट्रिकोणले भारत भन्दा धेरैं बलियो बन्नेछ।
अहिले पनि पाकिस्तानले देशको सुरक्षामा अत्याधिक धनराशि खर्चेको बताइएको छ। वर्तमान समयमा पाकिस्तानसँग १४० देखि १५० वटासम्म परमाणु हतियारहरू छन् र यदि हालको स्थिति जारी रहने हो भने सन २०२५ मा पाकिस्तानसँग २२० देखि २५० सम्म परमाणु हतियार हुने देखिएको छ। यस्तो हुनु भनेको भारत लगायतका देशहरुका लागि खत्तराको घण्टी हुने देखिएको छ ।
अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेन्सीले सन १९९९ मा अनुमान गरेको थियो कि सन २०२० मा २० देखि ८० सम्म परमाणु हतियारहरू पाकिस्तानमा हुनेछन् तर यसका अनुसार ज्ञद्धण् देखि ज्ञछण् सम्मको तुलनामा ६० देखि ८० भन्दा बढी हतियारहरु छन्।
पाकिस्तानको परमाणु सेना २०१८ , हन्स एम क्रिस्सेन्सेन्सन, रबर्ट एस नरिसन र जुलिया डायमियमले भने, हामी अनुमान गर्दछौं कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रहने हो भने , सन २०२५ सम्म, देशको परमाणु भण्डार २०० देखि २५० भन्दा बढी पुग्न सक्छ। यदि यो भयो हुन्छ भने पाकिस्तान विश्वमा पाँचौं सबैभन्दा ठूलो परमाणु हतियार भएको देश हुनेछ ।
प्रमुख लेखक क्रिस्टेंसेन वाशिंगटन, डीसीमा अमेरिकी वैज्ञानिक (एफएएस) संघको परमाणु सूचना प्रोजेक्ट निर्देशक हुन । यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि , गत दशकमा अमेरिकाले परमाणुको प्रभावका बारेमा पाकिस्तानमा परमाणु हतियारको सुरक्षाका बारेमा गरिएको अनुमान धेरैं फरक देखिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
शेयर बजारः करीब चौध अङ्कले बढ्यो